ဘုရားမရှိတော့ပေမယ့်မာရ်နတ်က သိကြားမင်းတိုတာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကိုဘာလို့သွားမသိမ်းလဲ ? - Kanaung News
ဘုရားမရှိတော့ပေမယ့်မာရ်နတ်က သိကြားမင်းတိုတာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကိုဘာလို့သွားမသိမ်းလဲ ?
မာရ်နတ်ဟာ နတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အထက်ဆုံး နတ်ဘုံမှာနေတယ်။နတ်ပြည် ၆ထပ်ရဲ့ စည်းစိမ်နဲ့ သက်တမ်းလေး နည်းနည်းပြောပြမယ်။
☆စတုမဟာရာဇ်နတ်ပြည်ဆိုတာ မြင်းမိုရ်တောင်ရဲ့ အလယ်မှာရှိတယ်။ဓတရဋ္ဌ၊ ဝိရုဠှက၊ ဝိရူပက္ခ၊ ကုဝေရဆိုတဲ့ နတ်မင်းကြီး လေးပါးက အုပ်ချုပ်တယ်။စတုမဟာရာဇ်နတ်တွေဆိုတာ အလွန်တန်ခိုးကြီးတယ်။သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ရှိတယ်။လူသက်နဲ့ဆို အနှစ် ၉သန်းရှိတယ်။
☆တာဝတိံသာ သူ့ထက်ပိုပြီးမြင့်တယ်။ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှာ ရှိတယ်။သိကြားမင်း ဦးမဃနဲ့တကွ ၃၃ယောက်သောနတ်မင်းကြီးတို့ အုပ်စိုးတယ်။အခေါင်နတ်မင်းကတော့ ဦးမဃပဲ။ (မာဃမဟုတ် မဃသာအမှန်)တခြားနတ်မင်းတွေလည်းရှိတယ်။ နတ်သားတစ်ယောက်တောင်မှ နတ်သမီးအခြွေအရံ၅၀၀ ခြံရံပြီး ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကို ခံစားတယ်။သက်တမ်းက နှစ်၁၀၀၀ လူလိုတွက်ရင် ၃ကုဋေ၆သန်းရှိတယ်။
☆ယာမာကနေစပြီး ဘုံဗိမာန်တွေဟာ ကောင်းကင်ယံမှာတည်တယ်။ယာမာနတ်တွေကို ဆင်းရဲခြင်းကင်းသောနတ်တွေလို့ခေါ်တယ်။နတ်ချမ်းသာကိုချည့် သီးသန့်ခံစားတဲ့နတ်တွေ။သက်တမ်းက နှစ် ၂၀၀၀ လူလိုတွက်ရင် ၁၄ကုဋေ၄သန်းရှိတယ်။နတ်ဘုံတိုင်းမှာ ကိုယ့် နတ်မင်းကြီးနဲ့ကိုယ်ရှိတယ်။ယာမာ နတ်ပြည်အတွက်တော့ သုယာမနတ်မင်းက အခေါင်နတ်မင်းကြီးပဲ။
☆တုသိတာနတ်ပြည်ဆိုတာ အလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းတယ်။ဘုရားလောင်းနဲ့ မယ်တော်ဟောင်းတွေဒီဘုံမှာ လာဖြစ်ကြတယ်။အခေါင်နတ်မင်းကြီးက သန္တုဿိတနတ်မင်းပဲ။သက်တမ်းက နှစ် ၄၀၀၀ လူလိုဆို ၅၇ကုဋေ၆သန်းရှိတယ်။
☆နိမ္မာနရတိနတ်ပြည်ဆိုတာ ကိုယ့်စည်းစိမ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးလို့ရတယ်။အောက်ကနတ်ပြည်တွေက ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံအလိုက် ဘုံဗိမာန် အစရှိသဖြင့် ရတယ်။ဒီနတ်ပြည်ကတော့ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးပြီး ခံစားလို့ရတယ်။လိုတာထက်ပိုပြီးခံစားလို့ရတယ်။သက်တမ်းက နှစ် ၈၀၀၀ လူလိုဆို ၂၃၀ကုဋေ၄သန်းရှိတယ်။ကျောင်းတကာမကြီး ဝိသာခါ သေတော့ ဒီဘုံကို ရောက်တယ်။
☆ပရနိမ္မိတဝဿဝတီနတ်ပြည်က နတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အမြင့်ဆုံးပဲ။စည်းစိမ်ကလည်း ကိုယ်တိုင်တောင်ဖန်ဆင်းစရာမလိုဘူး။ကျွန်အစေအပါးနတ်တွေက ဖန်ဆင်းပေးတယ်။သူတို့က လိုတာထက်ပိုပြီး ခံစားချင်ရင်တောင် သူများဖန်ဆင်းပေးရတယ်။သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ လူလို ၉၂၁သန်းအထိ ရှည်ကြာတယ်။
မာရ်နတ်က ဒီဘုံမှာနေတယ်။ အခေါင်နတ်မင်းကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။မာရ်နတ်သားပဲ။ အခေါင်နတ်မင်းကြီးက ဝဿဝတီနတ်မင်းကြီး သပ်သပ်ရှိတယ်။မာရ်နတ်ကို စင်ပြိုင်လို့တော့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ သူ့တပည့်တွေက များတာကိုး။
ဗိုလ်ဆိုလည်း သူပုန်ဗိုလ်ပဲဆိုပါတော့။မာရ်နတ်က ပုံထဲကလို ရုပ်ဆိုးဆိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကာမာဝစရနတ်ပြည် ၆ထပ်မှာ အချောအလှဆုံးနတ်တွေထဲက တစ်ပါးပါ။အားကြီးတဲ့ ကုသိုလ်ကံတွေ ပြုခဲ့ဖူးသူပါ။ဒီလောက်ဆို မာရ်နတ်က သိကြားမင်းကို ဘာလို့ သွားပြီး မတိုက်ခိုက် မသိမ်းပိုက်သလဲသိလောက်ပြီပေါ့နော်။
သူ့နေရာလောက်မှ စည်းစိမ်ချမ်းသာမရှိ။ သက်တမ်းမရှည်တဲ့နေရာကို သူကဘာလုပ်ဖို့လာသိမ်းမလဲ။ မာရ်နတ်က ဒီလောက်မအဘူးလေ။